Libaney Mpandihy, Mihamitombo Ny Fankasitrahan’ny Olona ny Asan-dry Zareo · Global Voices teny Malagasy
Libaney Mpandihy, Mihamitombo Ny Fankasitrahan'ny Olona ny Asan-dry Zareo
MpanoratraDalia El Ali
Voadika ny 29 Mey 2017 12:26 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, عربي, English
Cynthia Assadourian (ankavia) teny ambony sehatra tamin'ilay “Dia mihevitra izany ianao fa afaka mandihy? “. Pikantsary avy amin'ny alhatsary YouTube.
“Tena tsy mampino hoe asanay ireny fampisehoana ireny.”
Toy izany no namaritan'ilay Libaney mpandihy , Cynthia Assadourian, ho an'ny Global Voices ny fiantraikan'ireo fampisehoana toy ny an'ilay dika amin'ny teny Arabon'ilay Dia mihevitra izany ianao fa afaka mandihy?‘ (يلا نرقص) sy ny Mandihy miaraka amin'olomalaza (رقص النجوم) momba ny fahitàn'ny olona ny fandihizana.
Assadourian, izay fahiny efa mpifaninana ihany koa hisehatra ny Dia mihevitra izany ianao fa afaka mandihy?, dia nilaza fa nanatri-maso seho iray toy ny fanafahana ny vatana izy nanodidina azy:
Ny dihy Latina, indrindra indrindra, dia lasa tsy maintsy atao any amin'ireo efitrano fianarana dihy. Lahy sy vavy avy amin'ny sokajin-taona rehetra sy sarangam-piainana rehetra no hitanao any anaty efitrano fianarana dihy mba hanàla azy sy hiala voly. Na ireo lehilahy aza dia manary ny tahotra ny ho tsembo-dratsy. Tsy noheveriko velively mihitsy ny hiaina ny andro hahitako lehilahy hanao izany.
Mazava loatra, tonga avy any ny olona miaraka amin'ny tahotra ho tsy hahavita miaraka aminà soradihy, saingy ara-dalàna izany. Mety ho sarotra amin'ny voalohany, saingy amin'ny farany, ho zatra an'io ihany ny vatana sy ny sainao. Mila mizatra kely fotsiny sy miasa mafy. Misafidy ny dihy ny ankamaroan'ny olona raha oharina amin'ny fanaovana fanatanjahantena, satria tsy tsapa ho toy ny hoe manao fanazarantena io.
Tany am-boalohany, fony mbola kely mihitsy, dia efa nahasarika ny mason'ireo mpampianatra dihy azy i Lyne Gandour, mpandihy malaza amin'ny hip-hop. Noderaina hatrany ho manana angovo mora mifindra izy isaky ny nandihy. Ny fahafahany mitadidy ireo soradihy sy manao zavatra tsy ampoizina no mahatonga azy ho iray amin'ireo tanora mpandihy malaza indrindra ao Libanona. Toy ireo hafa marobe ao anatin'ny sehatra misy azy, Gandour koa dia nahamarika fiovàna fomba rehefa hoe mandihy no resaka:
Tena mbola zaza mihitsy aho no nanomboka nandihy, niaraka tamin'ny fanaovana fanatanjahantena, izay nianarako tany amin'ny firenena niaviako tany Côte D'Ivoire. Ny naha-nobeazina ahy tany Afrika dia namboly tato amiko fanajàna lehibe ho an'io endrika taokanto io. Rehefa nifindra nankaty Libanona aho, nitombo natanjaka avo folo heny ny fanokanantenako ho an'ny dihy, indrindra noho ny fomba fandraisan'ny olona ny dihy sy ireo mpandihy. Fony aho nanokatra ny trano voalohany fampianarako, ny tanjoko dia ny hanabe ireo mpianatro momba ny dihy ary hanao izay hiasàn'izy ireo mafy amin'izy io. Tiako ity sehatra ara-javakanto ity mba ho manaitaitra sy mandrisindrisika toy ireo goavana efa manandaza aty Libanona.
Tena samihafa amin'ny fomba fijerin'ny olona ny dihy fony izy tonga voalohany tao Libanona ny fiovàna hitan'iGandour tahàka izany:
Mino aho fa matetika ny dihy no somary nolaroina dika manambanimbany ihany taty amin'ny tontolo Arabo. Tsy tsapako velively hoe nahazo ny haja tokony ho azy ny dihy mandra-pisian'ny fandaharana toy ny “Mandihy miaraka amin'olomalaza” tonga taty amin'ny tontolo Arabo. Toy ny fahotàna no nijerena azy fa tsy mba toy ny endrika zavakanto.
Lazainy ihany koa fa ‘ireny fampisehoana dihy ireny no nitondra fanovàna ny fomba fijerin'ny olona:
Amin'ny fahitàna ireo olomalaza nataonao ho filamatra mampiseho ny aminy amin'ny alàlan'ny fomba fiteny vaovao iray dia mahatonga ireo rehetra mpankafy azy haniry ny hahatakatra hoe dihy inona io ataony io. Ny “Mandihy Miaraka Amin'Olomalaza” no nanome io endrika taokanto io ny vintany faharoa, nahafahan'ny tsirairay nahita ny tolona, ny fomba fitondra, ny fanokanantena nolalovan'ireo rehetra mpandihy ; izay mahatonga azy ho tena izy, mivantambantana ary azo ekena tanteraka
Vokatra iray tsy nandrasana tamin'ity laza ity ny fitomboan'ireo lahatsary ‘pop musics’ amin'ny teny Arabo, ampiasàna tarika mpandihy izay miaka-tsehatra manao soradihy kinangananga aorian'ilay artista. Ireo artista Arabo toa an'i Najwa Karam sy Assi El Helani dia nandray anjara tamin'ity fironana vaovao malaza ity, na dia fanaovana mozika tsy manalavitra loatra ny karazana hip-hop aza.
Miteny momba ity fironana malaza ity i Charles Makriss, safiotra Grika-Libaney mpisava làlana amin'ny hip-hop:
Indraindray tonga manatona ahy amin'ny minitra farany ireo artista fa te-hianatra soradihy. Ny marina dia, famindra iray na roa ihany no ampianariko azy ireo. Tena mampanaintaina ny mahita olona tsy mpandihy miezaka ny hanatanteraka soradihy. Io no antony isafidianako ny miditra ao anatin'ny tarika mpandihiko manokana. Tsy tiako ny manao izay tsy hampahazo aina ilay artista sy hanao izay haha-afa-baràka an-dry zareo. Efa maherin'ny 15 taona aho no nanao azy ity. Nanokatra ny sekoliko manokana mihitsy aho hampianarana hip-hop.
Tsy olana izay antony, efa mazava ankehitriny ny fiovàna ao anatin'ny fomba fijerin'ny olona ny dihy ao Libanona.
Miaraka amin'ireo fampisehoana dihy manasongadina ny habetsahana tsy mampino amin'ny resaka fanolorantena sy ezaka ataon'ireo mpandihy — sy tsy mpandihy — narafitra anaty ampahanà soradihy maharitra telo minitra monja, tsy mahagaga raha marobe ankehitriny ireo mpandihy no manokatra sekoly fianarana dihy.
Na ireo fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo aza, toy ny Lebanese American University (LAU) – Anjerimanontolo Amerikàna ao Libanona, dia niantsambotra nandray ilay lamasinin'ny fampisehoana, nahatonga azy ho voalohany namaly ny antson'ireo mpianatra liana hanohy ny zavakanto fiakarana an-tsehatra ho toy ny asa. Anisan'ireo toeram-pianarana azo isaina amin'ny rantsan-tànana izy, manome diplaoma bakalaorea sy taranja iray ho an'ny Zavakanton'ny seho an-tSehatra.
Toa hita ho mora mandray kokoa ireo mpandihy matianina i Libanona, ary manaja kokoa ny maha-asa ny dihy. Tsy misy azo ambara momba izay mbola ho avoaky ny hoavy ho an'ity fironana mavitribitrika ity.
3 andro izayBahrain